ဇန်န၀ါရီမှာ မန်ယူအသင်းခေါ်ယူဖို့ ပစ်မှတ်ထားနေတဲ့ ကစားသမားများ
28 Nov 2018 . 2:42 PM
မန်ယူအသင်းနည်းပြ မော်ရင်ဟို Mourinho ဟာ ငွေကြေးအသုံးအစွဲကြမ်းတဲ့ နည်းပြဆိုတာ အားလုံးအသိပါ။ မော်ရင်ဟို ဟာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်ကစပြီး အခုအချိန်အထိ ကစားသမားအပြောင်းအရွှေ့အတွက်သုံးစွဲခဲ့တဲ့ ငွေကြေးက ပေါင်သန်း(၄၀၀)ကျော်ရှိပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ကာလမှာ မန်ယူအသင်းဟာ မော်ရင်ဟို ပစ်မှတ်ထားခဲ့တဲ့ ကစားသမားတွေကို မခေါ်ပေးနိုင်ခဲ့တာကြောင့် အသင်းရလဒ်ဆိုးရွားတဲ့ပွဲတွေမှာ မော်ရင်ဟို ဟာ ဒီအချက်ကို ထောက်ပြလေ့ရှိပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ မန်ယူအသင်းဟာ မော်ရင်ဟို ဇန်န၀ါရီအပြောင်းအရွှေ့ကာလမှာ ကစားသစ်ခေါ်ယူဖို့ အပြောင်းအရွှေ့စရိတ်လုံလောက်စွာပေးမယ်ဆိုတဲ့ အခြေအနေတွေရှိနေခဲ့ပါပြီ။ မော်ရင်ဟို ဟာလည်း သူ့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းခေါ်ယူဖို့ ပစ်မှတ်ထားနေတဲ့ ကစားသမားတွေရှိနေပြီး Akhayar Sports ပရိသတ်တွေအတွက် ဒီကစားသမားတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
(၄) အာနော်တိုဗစ် Arnautovic
၀က်စ်ဟမ်းအသင်းရဲ့ တိုက်စစ်ကစားသမား အာနော်တိုဗစ် Arnautovic ဟာ မော်ရင်ဟို ကာလရှည်ပစ်မှတ်ထားလာတဲ့ ကစားသမားတစ်ဦးပါ။ အသင်းမှာ လူကာကူ Lukaku ၊ ဆန်းချက်ဇ် Sanchez တို့ ရုန်းကန်နေရတာကြောင့် မော်ရင်ဟို ဟာ အာနော်တိုဗစ် ကို အခုချိန်ထိ ပစ်မှတ်ထားနေရတာဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ ၀က်စ်ဟမ်းအသင်းနည်းပြ ပယ်လီဂရီနီ Pellegrini ကတော့ အာနော်တိုဗစ် ဟာ အသင်းမှာ ပျော်ရွှင်နေပါတယ်လို့ ပြောကြားထားပေမယ့် ကစားသမားအပြောင်းအရွှေ့ဆိုတာ ဘာမှကြိုပြောလို့မရတာကြောင့် ဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်သွားရဦးမှာပါ။
(၃) အယ်လ်ဒါဝီရယ်လ် Alderweireld
စပါးအသင်းရဲ့ နောက်ခံလူ အယ်လ်ဒါဝီရယ်လ် Alderweireld ဟာ မော်ရင်ဟို ကာလရှည်ပစ်မှတ်ထားနေတဲ့ ကစားသမားတစ်ဦးပါပဲ။ ပြီးခဲ့တဲ့ နွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့ကာလမှာ မန်ယူအသင်းကို အယ်လ်ဒါဝီရယ်လ် ဟာ ရောက်ရှိဖို့နီးစပ်ခဲ့ပေမယ့် စပါးအသင်းရဲ့ မတန်တဆဈေးကြောင့်သာ အပြောင်းအရွှေ့ကဖြစ်မလာခဲ့တာပါ။ အယ်လ်ဒါဝီရယ်လ်ရဲ့ စာချုပ်သက်တမ်းဟာ ဒီနှစ်ဘောလုံးရာသီကုန်မှာ ကုန်ဆုံးမှာဖြစ်တာကြောင့် မန်ယူအသင်းအနေနဲ့ လက်ရှိမှာ အယ်လ်ဒါဝီရယ်လ် ကိုခေါ်ယူမယ်ဆိုရင် ပုံမှန်ထက်လျော့နည်းတဲ့ ပြောင်းရွှေ့ကြေးနဲ့ ခေါ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
(၂) ကာဟေးလ် Cahill
မော်ရင်ဟိုနဲ့ ချယ်လ်ဆီးအသင်းမှာတုန်းက အတွဲညီခဲ့တဲ့ နောက်ခံလူ ကာဟေးလ် Cahill ဟာလည်း ဒီစာရင်းမှာပါဝင်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကာဟေးလ် ဟာ အသက်(၃၂)နှစ်အရွယ်ရှိနေပြီဖြစ်တာကြောင့် မန်ယူအသင်းကိုရောက်လာဖို့ကတော့ ရာခိုင်နှုန်းနည်းပါတယ်။
(၁) ကူလီဘလီ Koulibaly
နာပိုလီနောက်ခံလူ ကူလီဘလီ Koulibaly ဟာ မော်ရင်ဟိုရဲ့ ထိပ်တန်းပစ်မှတ်ကစားသမားပဲဖြစ်ပါတယ်။ မော်ရင်ဟို ဟာလည်း ကူလီဘလီ ကို နောက်ခံလူ စံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ကြေးနဲ့ ခေါ်ယူမယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေကြောင့်လည်း အနေအထားတွေဟာ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါတယ်။ မန်ယူအသင်းအနေနဲ့လည်း ဒီတစ်ခါမှာတော့ မော်ရင်ဟိုရဲ့ ဆန္ဒကို ဖြစ်မြောက်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မလားဆိုတာကို စောင့်ကြည့်သွားရပါလိမ့်မယ်။
Photo: The Boot Room , Evening Standard , Hoy Los Ángeles
ဇနျနဝါရီမှာ မနျယူအသငျးချေါယူဖို့ ပဈမှတျထားနတေဲ့ ကစားသမားမြား
မနျယူအသငျးနညျးပွ မျောရငျဟို Mourinho ဟာ ငှကွေေးအသုံးအစှဲကွမျးတဲ့ နညျးပွဆိုတာ အားလုံးအသိပါ။ မျောရငျဟို ဟာ ၂၀၁၆ ခုနှဈကစပွီး အခုအခြိနျအထိ ကစားသမားအပွောငျးအရှအေ့တှကျသုံးစှဲခဲ့တဲ့ ငှကွေေးက ပေါငျသနျး(၄၀၀)ကြျောရှိပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ အပွောငျးအရှကေ့ာလမှာ မနျယူအသငျးဟာ မျောရငျဟို ပဈမှတျထားခဲ့တဲ့ ကစားသမားတှကေို မချေါပေးနိုငျခဲ့တာကွောငျ့ အသငျးရလဒျဆိုးရှားတဲ့ပှဲတှမှော မျောရငျဟို ဟာ ဒီအခကျြကို ထောကျပွလရှေိ့ပါတယျ။ လကျရှိမှာတော့ မနျယူအသငျးဟာ မျောရငျဟို ဇနျနဝါရီအပွောငျးအရှကေ့ာလမှာ ကစားသဈချေါယူဖို့ အပွောငျးအရှစေ့ရိတျလုံလောကျစှာပေးမယျဆိုတဲ့ အခွအေနတှေရှေိနခေဲ့ပါပွီ။ မျောရငျဟို ဟာလညျး သူ့ရဲ့ထုံးစံအတိုငျးချေါယူဖို့ ပဈမှတျထားနတေဲ့ ကစားသမားတှရှေိနပွေီး Akhayar Sports ပရိသတျတှအေတှကျ ဒီကစားသမားတှကေို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
(၄) အာနျောတိုဗဈ Arnautovic
ဝကျဈဟမျးအသငျးရဲ့ တိုကျစဈကစားသမား အာနျောတိုဗဈ Arnautovic ဟာ မျောရငျဟို ကာလရှညျပဈမှတျထားလာတဲ့ ကစားသမားတဈဦးပါ။ အသငျးမှာ လူကာကူ Lukaku ၊ ဆနျးခကျြဇျ Sanchez တို့ ရုနျးကနျနရေတာကွောငျ့ မျောရငျဟို ဟာ အာနျောတိုဗဈ ကို အခုခြိနျထိ ပဈမှတျထားနရေတာဆိုလညျး မမှားပါဘူး။ ဝကျဈဟမျးအသငျးနညျးပွ ပယျလီဂရီနီ Pellegrini ကတော့ အာနျောတိုဗဈ ဟာ အသငျးမှာ ပြျောရှငျနပေါတယျလို့ ပွောကွားထားပမေယျ့ ကစားသမားအပွောငျးအရှဆေို့တာ ဘာမှကွိုပွောလို့မရတာကွောငျ့ ဆကျပွီးစောငျ့ကွညျ့သှားရဦးမှာပါ။
(၃) အယျလျဒါဝီရယျလျ Alderweireld
စပါးအသငျးရဲ့ နောကျခံလူ အယျလျဒါဝီရယျလျ Alderweireld ဟာ မျောရငျဟို ကာလရှညျပဈမှတျထားနတေဲ့ ကစားသမားတဈဦးပါပဲ။ ပွီးခဲ့တဲ့ နှရောသီအပွောငျးအရှကေ့ာလမှာ မနျယူအသငျးကို အယျလျဒါဝီရယျလျ ဟာ ရောကျရှိဖို့နီးစပျခဲ့ပမေယျ့ စပါးအသငျးရဲ့ မတနျတဆဈေးကွောငျ့သာ အပွောငျးအရှကေ့ဖွဈမလာခဲ့တာပါ။ အယျလျဒါဝီရယျလျရဲ့ စာခြုပျသကျတမျးဟာ ဒီနှဈဘောလုံးရာသီကုနျမှာ ကုနျဆုံးမှာဖွဈတာကွောငျ့ မနျယူအသငျးအနနေဲ့ လကျရှိမှာ အယျလျဒါဝီရယျလျ ကိုချေါယူမယျဆိုရငျ ပုံမှနျထကျလြော့နညျးတဲ့ ပွောငျးရှကွေ့ေးနဲ့ ချေါယူနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
(၂) ကာဟေးလျ Cahill
မျောရငျဟိုနဲ့ ခယျြလျဆီးအသငျးမှာတုနျးက အတှဲညီခဲ့တဲ့ နောကျခံလူ ကာဟေးလျ Cahill ဟာလညျး ဒီစာရငျးမှာပါဝငျနပေါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကာဟေးလျ ဟာ အသကျ(၃၂)နှဈအရှယျရှိနပွေီဖွဈတာကွောငျ့ မနျယူအသငျးကိုရောကျလာဖို့ကတော့ ရာခိုငျနှုနျးနညျးပါတယျ။
နာပိုလီနောကျခံလူ ကူလီဘလီ Koulibaly ဟာ မျောရငျဟိုရဲ့ ထိပျတနျးပဈမှတျကစားသမားပဲဖွဈပါတယျ။ မျောရငျဟို ဟာလညျး ကူလီဘလီ ကို နောကျခံလူ စံခြိနျတငျပွောငျးရှကွေ့ေးနဲ့ ချေါယူမယျဆိုတဲ့ သတငျးတှကွေောငျ့လညျး အနအေထားတှဟော စိတျဝငျစားဖို့ကောငျးနပေါတယျ။ မနျယူအသငျးအနနေဲ့လညျး ဒီတဈခါမှာတော့ မျောရငျဟိုရဲ့ ဆန်ဒကို ဖွဈမွောကျအောငျ လုပျဆောငျပေးနိုငျမလားဆိုတာကို စောငျ့ကွညျ့သှားရပါလိမျ့မယျ။
by Ko Kyue . 51 mins ago